इन्स्टाग्राम Archives - Lokpati.com
Tag - इन्स्टाग्राम
इन्स्टाग्राममा खाता खोल्दा अब जन्ममिति खुलाउनु पर्ने
एजेन्सी। अब इन्स्टाग्राममा खाता खोल्दा जन्ममिति खुलाउनु पर्ने भएको छ। अहिलेसम्म इन्स्टाग्राममा खाता खोल्दा उमेर मात्रै उल्लेख गरे हुन्थ्यो, ठ्याक्कै जन्ममिति राख्नु पर्थेन। तर अब इन्स्टाग्राममा नयाँ अकाउन्ट खोल्दा...
फेसबुकले लगायो भान्टा र आरुमाथि प्रतिबन्ध
एजेन्सी। सोसल मिडिया प्लाटर्फम फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामले भान्टा र आरुको इमोजीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।सामाजिक मर्यादा सम्बन्धी आफ्नो मापदण्डमा परिवर्तन गर्दै भान्टा र आरुको इमोजीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।योसँगै अब फेसबुक र...
फलोअर्सले मर्दा ठिक हुन्छ भनेपछि किशोरीले गरिन् आत्महत्या
काठमाडौं, २ जेठ। फोटो शेयरिङ एप इन्स्टाग्राममा मत सर्वेक्षण गरेर एक जना किशोरीले आत्महत्या गरेकी छन्। मलेसियाकी एक १६ वर्षीया किशोरीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफ्ना फलोअर्ससँग मत सर्वेक्षण गरेकी थिइन्।
मत सर्भेक्षणमा उनले...
तपाईंको इन्स्टाग्राम पासवर्ड ह्याक भएकाे त छैन ? फेसबुकले गर्‍यो यस्ताे खुलासा
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले गत महिना ‘दशौं लाख’ इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरु प्रभावित भएको जनाएको छ ।
फेसबुकले गत महिना भएको पासवर्डसँग सम्बन्धित घटनाबाट इन्स्टाग्राका दश लाख प्रयोगकर्ता प्रभावित भएको पुष्टी गरेको...
यी हुन् एक हजार बढी फलोअर्स हुने एक वर्षिया इन्स्टाग्राम सेलिब्रेटी
एजेन्सी । सामान्यतया इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सन्जालमा सबै भन्दा बढी फलोअर्स कसको हुन्छ ? सबैको साझा उत्तर हुन्छ सेलिबे्रटी तर, सुन्दा अचम्म लाग्ला एक वर्षिया एक बालिकाले सो रेकर्ड तोडेकी छिन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर...
‘सेलिब्रिटी’ : कसका कति छन् इन्स्टाग्राम फलोअर्स ?
काठमाडौं । इन्स्टाग्राम फोटो तथा भिडियो सेयरका लागि लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल मानिन्छ । इन्स्टाग्राम सन् २०१०, अक्टोबर ६ मा लन्च भएको थियो । यसको स्वामित्व फेसबुकससँग छ । सन् २०१८ मा इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा बढी फलोअर्स हुने...
इन्स्टाग्राममा मोदी ‘मोस्ट पपुलर’ : ‘फलोअर्स’ कति ?
तस्वीर तथा भिडियोका सेयर गर्नका लागि प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको भगिनी संस्था इन्स्टाग्राममा राजनीतिक नेताहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै ‘फलोअर्स’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रहेको पाइएको छ ।